Yedu Fekitori | Hebei Ainister Kunze & Export Kutengesa Co, Ltd.
Midziyo ndiyo musimboti wedhizaini dhizaini, uye zvakare inzvimbo yatinobhadhara zvakanyanya, izvo zvinokanganisa zvakananga mamiriro ekugadzira.Tine fekitori yedu pachedu, iyo inonyanya kugadzira uye inogadzira ese marudzi ezvigadzirwa zvekugadzira zvigadzirwa. , ham, dumplings, manoodles, uye zvimwe zvigadzirwa zvenyama uye pasita zvigadzirwa.Tine makore anopfuura makumi matatu ekugadzira ruzivo kusangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana.Panguva imwecheteyo, isu zvakare tine akatsiga ekubatana pamwe chete, kuitira kuona mhando uye mukurumbira, isu tine akaomarara ekuyera zviyero zvevamwe.
Yedu gungano mutsetse une mbishi yekucheka zvinhu, kutenderera, kuunganidza, kugadzirisa uye mamwe madhipatimendi. Isu zvakare tine chaiyo yekukanda fekitori, iyo yakarongedzwa nehungwaru machining, yekuverenga kudzora uye zvimwe zvishandiso kusangana neyakagadziriswa shanduko yemidziyo yakasiyana. Isu takasangana nevashandi vehunyanzvi nehunyanzvi kuti tidzivise njodzi dzisina basa uye kurasikirwa kunokonzerwa nezvikanganiso zvakanyanya sezvinobvira kugadzirisa mashandiro emidziyo kune yakanakisa nyika.
Isu tinogara tichitenda zvakasimba kuti mahunyanzvi epamusoro ndiwo akakosha epfuma yekugadzira kambani, saka takagara tichikoshesa uye tichikoshesa kudzidziswa kwevashandi. Vanozvipira kune iro dhizaini dhizaini, dhipatimendi rezvigadzirwa, dhipatimendi rekutenga, dhipatimendi rekutengesa uye zvimwe zvinzvimbo Vashandi ve300 sekutsigirwa kwehunyanzvi, kuti vakupe iwe timu yehunyanzvi. Panguva imwecheteyo, isu zvakare tinoshanda pamwe neakanakisa vagadziri vanobva pasirese pasirese, dzidza nekutaurirana nemumwe nemumwe, chengetedza izvo zvinodiwa pamusika uye mamiriro emusika, uye tidzivise kusara kumashure.
Dzidza zvakawanda nezve ruzivo rwefekitori uye zvigadzirwa? Tine yakazvimirira fekitori webhusaiti, tinogamuchirwa kushanyira.
Dzvanya Kuti Ushanyire Fekitori REDU